ucele utshale inqwaba yamaphoyisa emalokishini agcwele ubugebengu - Ilanga News
Home Izindaba ucele utshale inqwaba yamaphoyisa emalokishini agcwele ubugebengu
ucele utshale inqwaba yamaphoyisa emalokishini agcwele ubugebengu
AMANYE amaphoyisa atshalwe ukuyolekelela ePlessislaer, njengoba zanda izigameko zokubulawa kwabantu nobugebengu kuleya ndawo. IZITHOMBE NGU: LUCKY CAIN
SKHOSIPHI MTHEMBU noLucky Cain
LINIKWE igama elisha “leMbali Ebolile” nguNgqongqoshe wama-Phoyisa, uMnu Bheki Cele ilokishi lodumo laseMgungundlovu, iMbali, ngenxa yezigameko zobugebe-ngu obudlangile zokubulawa
UMnu Cele ubeseMgungundlovu izolo ngoLwesithathu eyokwenge-za ngamaphoyisa awu-50 esiteshini sakuleli lokishi, iPlessislaer, ukuzama ukulwa nalobu bugebengu, njengoba kuvela ukuthi babalelwa ku-70 abantu ababulewe ezinya-ngeni ezintathu kuleli lokishi.
Akakhalanga nje ngeMbali ebolile kuphela, ukhale nangeKwaDa-mbuza nePata – khona eMgungu-ndlovu – nazo lezi zindawo okuvela ukuthi ubugebengu budla lubi kuzona.
Uthe zimbili izifundazwe ezime-nza aphathwe yikhanda ngenxa yobugebengu, yiKwaZulu-Natal neWesten Cape.
“Ngeledlule besiseWestern Cape siyobhekana nendaba yobugebengu obuxakile. Lonke leli sonto ngizolichitha KwaZulu-Natal, njengoba sitshale amapho-yisa ezindaweni ezahlukene eNa-nda, eMlazi nalapha ePlessislaer.
“INanda yiyona ehamba pha-mbili ngobugebengu, kulandele uMlazi, manje sekuqale nePlessi-slaer esivele yaba nesikhwele, yabangisa la malokishi ahamba phambili ngobugebengu.
“Leli lokishi sekuyiseMbali ebolile ngenxa yezinga lobugebengu. ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kutholakale izidumbu ezimbili zabesifazane, zinqunyiwe. Abantu balapha utshwala kababuphuzi babhukuda kubona.
“Lokhu kudalwa nawukuthi lapha eMbali kunamashibhi awu-125, okwenza abantu bazinikele etshwaleni bese kwanda nobugebengu,” kusho uMnu Cele.
Uthe selokhu kwatshalwa la maphoyisa ngeledlule, namanye awu-44, baningi abantu asebebo-shiwe ngamacala ahlukene.
“Sizosebenzisana nophiko lwezokushushisa ukuqinisekisa ukuthi ababoshiwe bayagwetshwa,” kusho yena.
Uxwayise amaphoyisa asebenzi-sana nezigebengu, wathi uma ekhona, angakwenzi lokho ngomfa-niswano wamaphoyisa. Uxwayise ngokuthi uma sezifikile
ezakwadalawane, zizogugula yonke into kubalwa nawo lawo maphoyisa asebenzisana nezigebengu.
Uqede lapho waya ezindaweni ezahlukene okubalwa neMbale-nhle Clinic, lapho kuvele khona ukuthi abantu abaningi abasuke belimele ngezizathu zobugebengu, bayaye baphuthunyiswe khona.
Utheleke kulo mtholampilo ku-ngazelele muntu, wanxusa kuba-phathi ukuba kuthi uma kufika umuntu olimele noma odutshuliwe, bangananazi, bashayele amaphoyisa ngoba kungenzeka ukuthi hleze yisigebengu leso.
UMnu Cele utshele ILANGA ukuthi uyazi ngodaba lobugebengu bokubulawa kwabantu, oluyiva emphakathini waseBhamshela, nenkinga yesiteshi samaphoyisa aseNsuze esisebenzela umphaka-thi wakule ndawo.
“Njengoba ngihamba nomkhuzi wamaphoyisa omusha waKwaZulu-Natal, uLt Col Nhlanhla Mkhwa-nazi, zikhona izinguquko ezizobonakala.
“Isiteshi saseNzuse singesinye seziteshi esizibhekile futhi esizoyilungisa indaba yaso,” kusho uMnu Cele.
Previous articleisichithile inkantolo isicelo sikazuma
Next articleSiduve emakhazeni isidumbu sowaKwaShembe esibangwayo